Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Nyamavhuvhu 10, 2018
Nyamavhuvhu 10, 2018
Magweta ari kumirira mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, anosvitsa zviri pamutemo magwaro awo kudare reConstitutional Court achipikisa zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti mutungamiri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mangangwa, ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Magweta aya ari kuda kuti dare ridome VaChamisa semutungamiri wenyika.
Magweta ari kumirira mutungamiri wePeople’s Democratic Party, VaTendai Biti, anoti hurumende yakatyora mutemo payakatambira VaBiti vachibva mumaoko evakuru vakuru vemuZambia sezvo paive nemutongo wedare wekuti VaBiti vasadzoserwe kuZimbabwe. .
Vanhu vakawanda vekuZambia vanoshora zvikuru zvakaitwa nehurumende yeZambia zvekuzvidza mutongo wematare ayo panyaya yaVaBiti.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva kusvitswa kwaitwa magwaro neMDC Alliance achimisa kugadzwa kwaVaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika, achiti VaChamisa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika..